Amin'ny ankapobeny, ny rehetra dia mahita ny fananany sy ny mpitrandraka trano ary mivarotra azy any rehefa tonga ny fotoana handefasana izany. Misy safidy vaovao maro ankehitriny, ary efa antitra vitsivitsy, hividy sy hivarotra trano tokony hampiasaina.
Ny fampiasana mpanamboatra trano dia toa fomba iray mety handehanana eo amin'ilay dingana ary mety ho. Maro ny matihanina ao amin'ny orinasan-trano. Fa ianao dia eo amin'ny sehatry ny fanaovana ny vola avy amin'ny indostrian'ny trano mba tokony hikaroka fanafody mora kokoa satria "vola iray tapitrisa voavonjy dia vola arivo dolara".
Raha toa ianao manokana amin'ny faritra iray, dia nianatra izay rehetra azonao atao momba izany, mametraka ny fo aminao - tokony hanana safidy maro hafa azonao omena anao. Na izany na tsy izany, aoka ny mpiasan'ny fitiavanao manana ny antsipiriany momba ny zavatra takinao sy ny fandaniana, na dia tsy ilaina amin'ny fampianarana tokana na "irery" ny fampianarana dia omeo ny safidy hamidy izany amin'ny tenanao tsy misy sazy avy amin'ny mpikarakara.
Hanao izany ianao ny vola Amin'ny alàlan'ny ezaka ataonao manokana, amin'ny fividianana sy fivarotana, tsy ao anatin'ny tahirin-tsakafo ihany fa amin'ny alalan'ny fahafahana mifampiraharaha amin'ny mpivarotra sy ny mpividy mivantana ary ny fanaovana fifanarahana tsaratsara kokoa. Ny tombontsoa hafa amin'ny fifampiraharahana mivantana dia ny hahafahanao manara-maso akaiky kokoa ny fifanarahana ary manohy izany mihetsika amin'ny fomba tianao.
Tsarovy fa ianao no hany tokana mifandray aminao ny vola & ny fanananareo - ianao irery no tena miady amin'ny kibonao mba hahazoana ny fifanarahana tsara indrindra. Izay mivarotra ny fanananao na manandrana mandany anao ny vola Amin'ny fivarotana anao dia hanana ny fandaharam-potoanany manokana, dia izy ireo dia ho amin'ny saram-pianarana na ny komisiona izay ho loha laharana, fa tsy ny havizanana na ny tahiry.
Mazava ho azy fa hamela ny olona hametraka fifanarahana aminao ianao ary hahazo vola raha mahomby eo amin'ny sehatr'izy ireo, fa raha manao ezaka manokana ihany koa ianao mba hahitana sy hivarotra trano dia afaka mampiasa ny teny tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao ianao amin'ny fanaovana ny vola - NO!
Raha toa ianao ka afaka manonona NO ary midika izany fa manana safidy maro hafa ianao na mividy na mivarotra anao amin'ny toerana tsara indrindra. Raha tsapanao fa maneritery be dia be ianao, na dia ny fahitanao ny zava-misy dia midika izany fa miankina betsaka amin'ny olon-kafa ny fahombiazanao.
Mametraka ny tenanao amin'ny toerana izay tsy mila 'mila' olona ianao amin'ny famoronana safidy maro, lalao, fifandraisana ary valiny izay azonao ambara fa raha tsy misy zavatra tsy tadiavinao - ary tsy mandratra izany ianao. Ny fahafantarana izay tena ilainao dia lafiny iray manan-danja amin'izany, tokony ho azonao atao ny mamakafaka ny soso-kevitra mifanohitra amin'ny fepetra efa voalahanao.
Na mividy na mivarotra ianao dia ahafantaranao izay rehetra fantany momba azy, indrindra fa ireo olona izay samy manana ny fiantraikany amin'ny vondrona sosialy na orinasa. Ohatra, ireo olona manana mpitsabo na mpanao gazety dia mahita olona an-jatony ary maheno zavatra betsaka momba ny toerana.
Ataovy azo antoka fa manana ny fepetra takiana sy ny fandefasana anao amin'ny fomba tsara ianao mba hahafahanao manome ny antsipiriany amin'ny fampahalalana momba anao amin'ny toerana misy anao.
Asa mikasika ny andro: Misy fomba iray ahitana fomba hitadiavana ny fananana sy ny fivarotana ireo toetra - mianatra azy rehetra